France iyo Emaradka Carbta oo kala saxeexday Nuclear | maakhir.com
France iyo Emaradka Carbta oo kala saxeexday Nuclear
Paris:-Madaxweynaha Faransiiska Nicholas Sarkozy ayaa ku gacan-seyray qorshe looga digay inuu heshiis dhinaca Niyuukleerka la saxiixdo wadamada Carbta, Mr Sarkozay ayaa sheegay inuu Dalka Imaaradka Carbta ay kala saxeexdeen Hashiiska ah Hubka Nulearka.
Sarkozy oo booqasho hada ku maraya Imaaraadka carabta ayaa qalinka ku duugay heshiis dhigaya in wadankiisa quwada korontada ee Nugliyeerka u dhisayo Imaaraadka Carabta UAE, is ay labada Dalka Isaga kaashadaan Qowada Nuclearka.
Mr Sarkozy oo haatan Booqasho gaaban ku maraya Dalka Khaliijka ayaa waxa uu Qorshahiisu yahay inuu hora mariyo quwada Atoomikada ee Dalka France, walaw ay jiraan Dawladu badan oo uu ka cadhaysiiyay Hashiiska uu Madaxwaynaha Faransiisku la galay Emaraadka kuwaasi ay ka mid yihiin Dalka Israil.
Heshiiskan Nuclear-ka ayaa sidoo kale dawlada Faransiiska la saxiixatay wadamo ay ka mid yihiin Liibiya, Algeria, Qatar iyo Morooko, waxaana heshiiskan si weyn u soo dhaweeyay wadamada Carabta iyo dunida Muslinka oo ku telmamay talaabo xanbaarsan Hormar fiican.
Hadba Hashiiskaasii uu Madaxwayne Sarkozy lagalay wadamada Khaliijka ayaa waxay si wayn Ganafka ugu dhuftay Dawladaha Reer Galbeedka ah ee uu Maraykanku hor boodayo kuwaasi oo ku tel maamay arin aan loo baahnayn oo ay wadama badan oo Islaami ihi ay ka faa iidaysanayaan warshada Atoomikada Dhaliya ee la ga hir galinayo Dalka Emaraadka.
« Nuur Cadde oo ku baaqay wada hadalo
Tahriibayaal Dooniyi kula qalibantay Xeebaha Dalka Yeman »